Usomabhizinisi Russian German Lvovich Sterligov eyaduma hhayi impumelelo kuphela wezimali (kuba lomthetho dollar abayizinjinga lokuqala eRussia), kodwa futhi ngenxa yokuziphatha kwakhe ome njengeqanda okungahambisani ezihambisana etholakalayo ukuqonda abantu abavamile. Nokuceba ngempela, wachitha iminyaka eminingi phezu ruble, bese baya yimali, wathatha umndeni wayohlala ehlathini. Ekhaya labo elisha ayengenabo ompompi futhi central bafudumale. Umkakhe, owakhumbula zijwayele sokunethezeka, uHerman ucele ukugqoka isikhafu, ukupheka ukudla ebhodweni elula ngomlilo unezingane ekhaya.
Izingane muntu ephendukile ukuba imfundo ekhaya, wabafundisa indlela ukudubula isibhamu umshini futhi okuyinhloko inkemba. Ku-TV, yebo, nabo kwadingeka ukukhohlwa, njengoba yokuhlanza amazinyo. Amahemuhemu okuthi wonk Sterligov tyrannized izingane zakhe futhi ushaya umkakhe, sandile abezindaba ngokushesha. Unkosikazi Herman - Alena, banquma ukumphendula baxgeki yenu, namacebo enu futhi wabhala incwadi ngothando lwabo nokuphila komkhaya, okuyinto Okuxakayo okuthiwa ". Indoda washaywa ... Yini Ngabhekana ne-German Sterligov" Isethulo sencwadi senzeka eKiev. With gleam emehlweni kowesifazane watshela ngokuphila kwakhe kokuvamile zezilingo wabayisa pair German iminyaka ngomshado 25.
Namhlanje uzofunda ukuthi ungaphila kanjani impilo omunye imibhangqwana engavamile kakhulu futhi kungani bakhetha le ndlela yokuphila.
Sterligov German wazalwa ngo 1966. Ngesikhathi ukujola pair esizayo eneminyaka engamashumi amabili nantathu, mayelana yobudala efanayo futhi kwaba Alena Sterligova. Unyaka lokuzalwa intombazane ngandlela-thile neze esibekiwe, kodwa oh kahle. Herman yayisivele imali ehloniphekile bonyaka. Ngalesi sikhathi umuntu lowo wavuleka sebuthweni, ukusebenza kule mboni njengoba ngonyaka turner nezinyanga eziyisithupha bahlukane nakho e-Faculty of eMoscow University. Ngayeka isikole wayefanele ngenxa ezingqubuzana ofundisa umlando - i Communist bakukhonzile. Ngokuthi umbuso zamaKhomanisi le zokuchitheka kwegazi okukhulu kunakho emlandweni, isiJalimane ewa umusa uthisha kanye ngokushesha isinqumo sokuphuma cwaningo kanye yokwenza imali.
Elena Ivanovna Emelyanova (igama Alain ngaphambi komshado) ngesikhathi Usanda diploma Isikhungo Ukuphrinta futhi sesikulungele ukuqala ukuphila omdala. Alena uyise ngithola imali ebhekile, futhi umndeni wakhe uye njalo babehlala ukuchuma, kodwa lapho uyise eshona, umama wabo wangena izikweletu futhi ephoqwa ukuba athathe indawo ukuze iqashwe. Herman ngesikhathi nje ngifuna ehhovisi. Ngolunye usuku lapho ixoxa nengane noninazala Alena ukusebenzisana ezingaba khona, Allen wabe eseya ekamelweni lawo, wathi sawubona sahamba. Ngemva ambalwa izinyathelo, ezwa Herman isimbuza unina: "Ngeke ungivumele ngi ukushada nendodakazi yakho?". Umnikazi wendawo esasihlala kuyo wayethula udaba ihlaya, kodwa ngosuku olulodwa ngifuna usomabhizinisi wenza isiphakamiso intombazanyana. agumenti wakhe oyinhloko kwakuwukushumayela le nkulumo kanje: "Ngizoba isicebi." Futhi lokhu ngesikhathi lapho wonke umuntu wayefuna ukuba odokotela noma onjiniyela. Mayelana abayizinjinga eyaziwa ngaphandle izincwadi ngaleso sikhathi.
U-Alain, yebo, akazange avumelane, ngoba ngangazi ukuthi ongavunyelwe ukushada ngenxa yothando kuyadingeka. Herman kwaba ngempela ukucasha nsizwa - ukukhula ngezansi-isilinganiso, amadevu uyinqaba futhi izibuko phezu kwamehlo. ngomfanekiso waKhe akakwazanga ukuthola intombazane evamile. Ukuze Alena ke courted nezinye guys esasifuna kunenzuzo kakhulu. Kodwa kwakungegazi eJalimane into engase ukubamba intombazane, abanye engasenathonya ofuna ukuphumela obala. Kepha okuhlose bamphendule ukwehluleka. Ngakusasa, uHermann waboshwa futhi ubanjwe izinsuku ezimbalwa ezizayo ejele, badedelwa ngenxa yokushoda kobufakazi. Ngokusho Alena, ngalezo zinsuku, okokuqala waba nomuzwa wokuthi uhlangabezana umuntu. Kungakhathaliseki out isihawu, noma umane lungadambisa ekugcineni Alain evuma ukushada umuntu ukushada. Ngemva konyaka, isiJalimane kanye ngempela abe isicebi, waya ngokoqobo igcinwe imali ezikhwameni.
Ngokushesha emva komshado, uHerman wathi Alain, ayisoze yasebenza. Lokhu yadala intukuthelo phezu ingxenye abazali, kodwa usomabhizinisi weyengenandaba. Kunoma yikuphi, ngisho German waphonsa idiploma unkosikazi. Kuze kube manje, u-Alain uyaqaphela ukuthi uma useqalile ukusebenza, umndeni wabo ngabe liphuke.
On umbuzo: "Kuthiwani self-actualization" - U-Alyona Sterligov uyaphendula nje: ". With umyeni okunjalo akukhona isidina, ngingubani usozigidi, le ovtsevodsha, uthisha, ongumama wezingane eziningi" Uyawuvumela zonke izindaba zasekhaya amaphesenti ayikhulu, aluthole ukuphila okujabulisayo ezinjalo. Uyanezela ukuthi owesifazane kufanele njalo kube ngaphansi kwesivikelo indoda. Ukulingana, okuyinto lugujwa emhlabeni wanamuhla, kuholela Ukungadli owesilisa nowesifazane. Ngenxa yalokho, abantu musa uphile ukuphila okujabulisayo.
Njengoba asebenzelana ngayo umsebenzi iyisithandwa, isiJalimane Lvovich Sterligov ngobuqili isuswe kubangane bakhe ukuphila. Ngokushesha nje lapho ezwa ukuthi umkakhe wayethandana uyohlangabeza umuntu, masinyane ahlinzekwa ukuchitha isikhathi naye. Futhi njengoba wakwazi ukuhlela ezokungcebeleka abacebile ezithakazelisayo, unkosikazi njalo wakhetha ke. ekugcineni travel njalo Ngahlukana ubudlelwane nabangane bakhe. Kodwa Allen Akazisoli ke, njengoba umngane wakhe omkhulu futhi umalokazana baba indodakazi endala uPauline. Ngokusho Alena, izinsuku ukuthi wayechitha nendodakazi yakhe ngaphambi kokuba ashade ngaphandle, ningaqiniseka ukuthi iminwe.
By the way, indaba Pauline uthando kakhulu efana indaba unina. Ngolunye usuku umngane Herman Sterling wehlela phezu ibhizinisi. Wayehamba nsizwa. Pauline lwabasibekela etafuleni sahamba. Ngemva kwezinsuku ezintathu, umfana wafika woo. Njengoba isipho, eletha inkunzi emhlophe. Yiqiniso, uPolina wathi akathandi nsizwa, yena wathi: "Uthando". Futhi kwenzeka kanjalo. U-Alyona Sterligov ujabule indodakazi yakhe. Ukholelwa ukuthi umuntu onjalo - like kukhona udonga lwamatshe ngapha.
Uma-German Lvovich Sterligov wafika ekhaya kanti wathola umkakhe ekhishini ebuka kakhulu "Santa Barbara." Futhi hhayi nje ngifuna, kodwa futhi bayazwelana kakhulu namaqhawe. Le ndoda Wazama nokuchazela umkakhe ukuthi udinga ukuphila kwenu, fantasies hhayi zomunye umuntu, ekugcineni ngathi: ". Kuphakathi ngihambe, noma i-TV" Alain ngamawala wakhetha ithelevishini, futhi umyeni wakhe washiya. Ngemva ahlalele kwamaminithi ambalwa emotweni, wabuya esingu-TV aphume isibhamu. Lesi senzo kwagxila elinamandla Allen, kodwa wayesalokhu behluke ebusuku, i-TV ezincane, lapho umyeni wami babekhohliwe. Phakathi lezi zikhathi, wazizwa njengokungathi othile wayemi ngemuva kwakhe. Ekugcineni, kowesifazane ngokwakhe besusa lokugcina TV endlini.
Ushadile abangenalo uthando
Encwadini "Umyeni bakhanda 'Alain wathi ukuthi iminyaka yokuqala yokuphila kwasemshadweni akazange athande umyeni wakhe. Kodwa ngemva kwesikhathi esithile German namanje wakwazi ukunqoba inhliziyo sentombazane. Ngonyaka ngosuku okwenzeka ngalo lokuqala lomshado Herman wanikela ngeNdodana yakhe unkosikazi 365 rose - omunye nsuku bahlala ndawonye. Abazali bakhe kwakubacasula ukuthi imali ngakho kambi, kodwa Allen usamkhumbula le isixha. Ngemva kokufunda mayelana kuzalwe indodakazi yabo yokuqala, lo muntu wawangenisa esibhedlela yonke imoto umbala. Bakhandwa ibekwe ngokoqobo ezweni esibhedlela.
U-Alyona Sterligov bekulokhu eshadile engamashumi amabili nanhlanu, enendawo izingane ezinhlanu nabazukulu ezine. ukusebenzisana yabo ngempilo German kwakungelona serene. Nezixakaxaka amahlazo babe iziteleka Fist etafuleni yonke indawo. Kodwa kukho konke lokhu owesifazane uzizwa wanakekela umyeni wakhe. Yena uyaqonda ukuthi uma indoda ozitika zonke izifiso umkakhe - ke akanandaba. Enye into, lapho ethatha impilo somndeni, ukujula ukuphila, lithathelwe ke nenduduzo. Ngalesi Alain kanye futhi ngangikuthanda umyeni wakhe.
umndeni Sterligov washukumisa izikhathi 32. Lapho yomkhaya isibe isicebi, wayengumuntu wokuqala kuleli zwe liye uvule ihhovisi e-New York. Khona-ke benqotshwa London naseWashington. Khona umndeni esasikuyo manje nayo yayibiyelwe ukunakwa ezinkulukazi ezivela kwabezindaba kanye izimbangi. Ngenxa yokuthi kwakuyingozi, kwadingeka njalo yokushintsha indawo yokuhlala. Kwaphela isikhathi eside kwakungekho Sterligov ikhaya siqu. Athi ukujwayela endaweni eyodwa, uHerman wathi kuzophinde sekuyisikhathi ukuhambisa. U-Alain wabe nendodakazi yakhe wahlala iminyaka emibili e-New York, babuya, umndeni kuxazululwe phezu ruble, okuthiwa phakade. Herman Ngaleso sikhathi ngangineminyaka engu-27 ubudala. On the ruble babe zonke izimo ngoba ukuphila okunethezekile futhi uzinzile, okuyinto isikhathi eside kangaka ngiphuphe umndeni. Indlu Alena Sterligova baba samuntu ingcebo esingenza umndeni uthabe. Ngemva kokuthutha ngamunye ngamunye kusukela Sterligov kwadingeka abafana abathathu.
Ngo-2004, isiJalimane Lvovich Sterligov waya ukuphelelwa yimali. Lolu shintsho lwaqala ngesikhathi yokuthi wanquma ukusebenzisa i owayengumongameli waseRussia. Lo mkhankaso required utshalomali olukhulu. Indoda nje kuphela wachitha yonke imali yabo, kodwa futhi wathatha imali sina ezikweletini. Bese wonke okungazelelwe a candidacy yakhe uye wasuswa kusukela irejista. Ngaphandle ukucabanga, uHerman watshela umndeni baphinda ukuhambisa, futhi indlu phezu ruble kuyodingeka ukuthengisa ukuze ukusabalalisa izikweletu. Ngemva kwesonto, wathi umndeni uya bahlala ehlathini. Alena intukuthelo Kwakuyintokozo yodwa. Wayengafuni ukuba bangayeki ukuphila okunethezekile, kodwa isizathu esiyinhloko ukwesaba kwaba wakhe sokukhulelwa olandelayo. Herman waqinisekisa umkakhe, ethi lapho kufika isikhathi sokuba abelethe bayoba ikhaya elihle eliyingadi. Alain wayazi ukuthi umyeni wakhe nguye nje engenamsebenzi ukungacasuki, ngakho waphinda wavuma ukuba ozothatha izintambo isimo. Ngenxa yalokho, umkhaya waya Malaya Sloboda. Ekuqaleni babehlala etendeni elula. indlala njalo kanye nokuhlukumezeka abacindezelwe Alain, kodwa akuzange kuhlale isikhathi eside.
Herman wasigcina isithembiso sakhe, futhi ukushiya indlu isilungile. Allen namanje akazi lapho umyeni wakhe wathatha imali yokwakha. Kulo muzi kwakunezithombe ezenziwe ngokjuni, enophahla tile. Wonke umkhaya kwakuthiwa uyahlanya ngaye - inganekwane, hhayi endlini. Kodwa lokhu adventure akuphelanga Sterligov. Ngolunye usuku, bonke amaphupho imikhaya emisha ukuphila abangu ngokoqobo incinerated. Ngobusuku obandulela le Housewarming Alain evuswa ukukhala omakhelwane: "Sisebenza evutha!". Ukuvula amehlo akhe, wabona fabulous ekhaya lashiswa yabo. abantu elingaziwa umlilo, sakubhuqa usebenzisa uphethiloli Sebawoti.
Allen uthi encwadini yakhe "Muntu ngobugebengu", zonke lezi zenzakalo zishintshile ngokuphelele umbono yayo okunethezeka nenduduzo. Njengoba ayebazi ingcebo yeqiniso futhi ungafi kakhulu cishe endle, waqaphela ukuthi ukuze injabulo ngokwanele umama ukuwasha machine ezinkulu namanzi ashisayo. Futhi wayazi ukuthi uma umyeni wakhe kakhulu umuntu singamethemba ngezimpilo zabo kanye ezimpilweni zezingane zabo, khona-ke kungenzeka ngempela yini ukwakha ipharadesi phakathi kwezilenge. Uma umuntu zomile, ababuthakathaka-kneed futhi nje bengafaneleki, ngisho esigodlweni kanokusho kuzoba kubi. Indaba ekugcineni yikona okuvame ezitholakele ku-ruble, uyakhumbula Alena Sterligova.
Okwamanje, lo mkhaya uhlala emvelweni, ngaphandle kocingo noma iyiphi okudaliwe impucuko. It has a epulazini elikhulu nge izimvu, izimbuzi, amakalikuni amahhashi. Izingane azethembe ku sehhashi, futhi ephethe isibhamu ngesandla sakhe. Inhloko amadodana umndeni wafundisa wokubaza, ukuze indlu cishe zonke yenziwe ngezandla zabo. Futhi izibulo, manje oneminyaka engu-16 ubudala, wayeseyitholile eyakha indlu yayo yokuqala ngokhuni. Amadodana ukuthengisa yezandla zabo, kanye inyama nesinkwa okuzenzela. Lapho umnotho kuletha inzuzo enhle, umndeni waya yezitolo isifiso sezingubo ezintsha.
Sterligov amadodana kalula uhlabe isifuyo, ukuze kungaqali muchilos. Noma kunjalo, lezo zinqubo lwenziwa abadala ikakhulukazi. Ndawonye noyise abafana uhambe nokuzingela ukuhlangana amakhowe. Daily ngengane ngayinye kuyindaba okuzomele zingaba usizo kuye empilweni. umndeni School ngokuphelele. Indodakazi endala eminyakeni embalwa ukuya esikoleni, kodwa wayesekhona "ukuphila esikhathini esidlule." Izingane ukufunda iBhayibheli futhi ukubhekana othisha ngubani uqobo ukhetha uyise.
incwadi Alena ngokuthi "Muntu ile", kodwa eqinisweni umyeni neze isandla. Yiqiniso, umuntu onjalo pair ome njengeqanda ukuphikisana njalo, futhi izikhathi eziningi lo mbhangqwana base bezobulawa, kodwa ukushaya is ingafinyeleleki. Herman ukholelwa ukuthi umkakhe, ingafana kanjani nengane, udinga ukuxhumana nge isanqante and induku. U-Alyona Sterligov ebusheni bakhe bacabanga ukuthi le ndoda akasoze "ukuholwa" ukulimaza abesifazane. Kodwa ngemva kweminyaka ethile beshadile 25, waqaphela ukuthi le ntombazane ababuthakathaka futhi abangakwazi ukuzilwela kungaba ruffle ngisho nomuntu ozinzile impela.
Alena abesifazane ngokuvamile zivela kulo lonke leli lizwe. Ngamunye wabo ukhuluma Isiphelo sakhe futhi ngempilo yasemshadweni. Ngokuhamba kwesikhathi, u-Alain waqala ukuqonda ukuthi isizathu esiyinhloko usizi zabesifazane itholakala ukuntula inhlonipho neyakhe indoda. Abesifazane abaningi like umngane wakhe ngokukhohlisa, kodwa akawunakanga. Nalokho futhi, kwaba Heroine of indaba yethu uyakhumbula. Nokho, ngenxa eyinqaba nomsebenzi isiJalimane, yena wathola izimfihlo injabulo. Ukuthobeka nokuthembela ngokuphelele umyeni wakhe ukukhiqiza ukuthokoza kwakhe, futhi ngenxa yalokho, ngokuvumelana, uthi ku-internet Alena Sterligova.
Lapho ngiseyintombazanyana babevame ukuphikisana ngokuthi nomyeni wakhe, inkani, waqhubeka isimiso, kuze kube sekugcineni ukuvikela umbonwabo. Kodwa ekugcineni waqaphela ukuthi eJalimane ayikwazi ukusetshenziswa, ngisho imizwelo esiqine ngeke ukubaphoqa ukuba ushintshe umbono wabo. Ngubani u-Alain, ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, ukuthi ayiyona nomyeni wakhe. Ngisho uma engavumelani ngokuphelele naye futhi konke ngaphakathi is abilayo, u-Allen uhlanganisa ingcondvo, icabanga ngekusasa futhi uyaqonda ukuthi akukho umuzwa ubudlova. Futhi uma German akulungile, wagcina evuma. Mhlawumbe lokhu kungenxa ikhono ukuqaphela umyeni wabo Alain amaphutha ukufunda ukuthobeka.
Thola ubuhlobo, kunzima ukulondoloza isikhalazo kwemvelo kowesifazane, uthi ku-internet Alena Sterligova. Umyeni uyaqonda kuphela izimpikiswano amahlazo - imfucuza oyisiphukuphuku isikhathi. Hysteria ubulala ubufazi, kanye nokulawula Imininingwane. Alain neze ihlola ngaphandle kwendoda matasa, uyazi ukuthi njalo ophethe. Scenes wesikhwele lingenandawo lapha. Futhi ngakho-ke uhlala nomndeni okungavamile kangaka.
Namuhla sizofunda ngomlando, okuyinto encwadini yami watshela Alena Sterligova. Biography Lona wesifazane ufanelwe eziningi ezithakazelisayo, kanye indaba umyeni wakhe. Emangele umqondo Sterligov ngokuphila nemvelo, amaRashiya amaningi baye baba ngabalandeli babo. Kuze kube manje, Alena Sterligova, ogama amabhuku babé insindiso abesifazane ngeshwa, ihlangana abafundi kanye nemihlangano yokufundisa anikezelwe yiluphi uhlobo izikebhe zabesifazane. Herman yena, behola imali encane lifundisa amadoda, efuna ngaye ngokwakhe, ukuthi kufanele kube ikhanda wangempela umndeni futhi indlela yokwakha umnotho imvelo, okungaba inzuzo.
Othile ecabanga lokhu ontamolukhuni umndeni nabantu uphazamisekile emqondweni, ukhona nomona bezikhwepha zabo zomoya, kanye nekhono bahlala ngokuzwana nemvelo kanye nesiphila bathande zonke izinto eziphilayo. Njengoba sengineminyaka izimo ezahlukene, imali enhle futhi hamba ayinamali, Sterligov ekugcineni uyaqaphela emuva uyoqala ezintweni eziyisisekelo. Abakwazi uphume ezikweletini futhi waphinda batawuphumelela, kodwa wakhetha ukungahlukanisi ukwenza kanjalo. Laba bantu uhlaziye ukubaluleka kokuphila. Futhi noma yini kwaba, ngamunye wethu angafunda okuningi kubo.
Esiko movie - uhlu. Esiko horror movie
Umshini wokudubula ovela esitokisini ngezandla zakho: imidwebo, imiyalelo
Iron oxide zombala: nezinhlamvu, isicelo
Iphutha "Ukuxhuma" i-Dot 2 "kwinethiwekhi"